Realme Android TV 43 ″ Ongororo: Makwikwi Akaomarara eMi TV - WebSetNet
Kwemhando yemakore maviri-gore, Realme akawana kuzivikanwa uye kubudirira zvakanyanya kupfuura chero avo vanokwikwidza. The India-kuberekwa kutanga-up - inotungamirwa neChina Chinese hofori OPPO - yaenda munzira yepamusoro smartphone mhando dzeIndia uye nyika yose. Uku kukura kwakanyanya kunokonzerwa nekukasira kweiyo Realme uye nehudiki simba rayo iro yakange ichipinda muzvikamu zvakasiyana zvetekinoroji yevatengi. Kunyangwe iyo mhando yainyanya kuzivikanwa yeema smartphones, yave ichifamba zvishoma nezvishoma mumararamiro tech nezvigadzirwa zvakadai seisina waya uye zvechokwadi nhare dzisina waya. Iyo inotarisirawo kuwedzera tech zvigadzirwa zvakadai sevakangwara vakataura, maungira, uye nezvimwe kuti ivandudze mutsara wayo wezvigadzirwa zveIoT. Mwedzi wapfuura, Realme akapinda rimwe boka idzva uye yakaunza maviri bhajeti idzva Android TV mienzaniso.
Tenga paFlipkart: Realme TV 32 ″ (₹ 12,999) ||| Realme TV 43 ″ (₹ 21,999)
Realme's Android TV mutsara wakakwikwidzana nemhando mbiri - iri 32 ″ HD-yakagadzirira modhi uye ine 43 ″ yakazara HD modhi. Kunze kwemusiyano maererano nehukuru hwokuratidzwa uye kugadziriswa, ose ari Realme TV mhando akafanana. Ivo vanoratidzira yakafanana yemukati Hardware, yekupinda-yekubuditsa ports, yakafanana tuning yechiratidziro, uye yemuno tsigiro yeOTT zvishandiso seNetflix uye Amazon Prime Vhidhiyo.
Realme TV: Ongorora Pfupiso
Rakagadziriswa ruvara kubereka
178º yakatarisa pakuonekwa
Sarudzo dzekugadzirisa mufananidzo uye kurira
HDR10 rutsigiro inobvumira Netflix mazita ekutamba muHRR
Unimpantic yekurira mhando uye kushayikwa kwebhass
Dzimwe nguva lag uye jitter
Hapana maviri-bhendi Wi-Fi
Tambo yemagetsi haina kuparara
Realme TV 43 ″: Nhaurwa
Realme TV 43 ″
LED-backlit Vertical Alignment (VA) LCD pani
16: 9 yakaenzana nechiyero
2 x vakazara mutauri
2 x titter
I / O & Kubatana
3 x HDMI madoko
Digital Audio kunze
3.5mm jack yeAV yekukanda (shanduri inosanganiswa mubhokisi)
inowanikwa Android TV UI yakavakirwa pane Android 9 Pie
Nezve ongororo iyi: Realme yakatikweretesa iyo 43-inch musiyano neiyo yakazara HD pani yeongororo iyi uye zvinoonekwa mune ongororo iyi zvinoratidza zvakafanana - asi kwete yemhando yekupedzisira-yekupedzisira - sezvo paine panogona kunge paine mutsauko maringe nemashandisirwo ayo kunyangwe akafanana mune Hardware. Izvi zvinotariswa zvakaitwa mushure memavhiki anenge maviri ekushandisa iyo Realme TV.
Yaka uye Yakasikwa
Iyo Realme TV inouya neisina unintrusive dhizaini. Iyo inoratidzika yakaderera profil, kuyera 8 cm maererano nehupamhi pamwe nechikamu chakakora. Iyo Realme TV yemitambo iyo yakajairwa-chena zvipfeko zvekunze, uye payo payo profil inokwikwidzana neiwo chaiwo lean bezels ayo anoyera asingasviki sentiimendi mukukora.
Mucherechedzo weRealme uri pakati pechichi bezel yeTV uye pasi payo pane chidiki chidiki chekugara iyo infrared inogamuchira uye tsvuku LED inovhenekera kana TV ichinge yadzimwa kana pakamira. Pazasi pekomputa iyi pane bhatani-switch remagetsi uye ndiyo yega bhatani repanyama paTV.
Shure kweReanme TV inogadzirwa nepurasitiki yakasimba yepurasitoni. Iyo purasitiki - kunyange iri pachena uye isingabvumirwe - inonzwa yakasimba uye haichinji zvishoma kunze kwekunge iwe uchishandisa zvakanyanya kudzvinyirira. Pane akateedzana kutsvedza kumusana - pamwe kubatidza kupisa kunze - uye kumashure kwepaneru kunogona kuoneka kubuda mune aya masiraidhi.
Iyo Realme TV 43-inch yakadzika kupfuura mita yakareba uye kureba pakati pemakumbo maviri ndiko 90cm (3 tsoka). Makumbo-akavezwa makumbo eRealme TV anouya nemashira erubhoti pasi pemukati kuitira kudzivirira makumbo epurasitiki kubva pakatsemurwa netafura yaunoisa TV, pamwe nekuitendera kuti isanyanyo tenderera kutsvedza. Nekudaro, TV inorambidzwa nyore nyore kana ukaibvarura nemhosho nekuti makumbo haasi akareba zvakakwana, uye haana hukama hwakakwana neiwo kumeso. Izvo zvinogona kuitika inyaya kana uine vana kana mhuka dzinovaraidza mumba; saka, kukwira TV ndiyo yega inogadziriswa nyaya yacho. Iwe unogona kuraira chiyero chemadziro 20 x 20 cm icho chinofanirwa kubhadharwa zvakasiyana.
Ose maviri Realme TV mhando anoshandisa yepasi-kupfura stereo mutauri setup ine yakasanganiswa kubudiswa kwe 24W. Rutivi rumwe nerumwe runoratidza mutauri akazara-mutsara uye tweeter yekujekesa mune yekutsanangudza uye hurukuro.
Iko hakuna kuchinjika kana kukotama chero kupi zvako mumuviri weiyo Realme TV 43 ″, iyo inoratidza kutarisisa kune mhando kunyangwe mutengo unodhura. The yakakura Realme TV inorema chete 7kg uye inogona kusimudzwa nyore nyore kana kuiswa. Zvakawanda, kuvaka kweiyo Realme TV kunoruramisa mutengo wayo.
Iyo yakakura Realme TV modhi yakarongedzwa neiyo yakazara HD kuratidza ine LED-backlit Vertical Alignment (VA) LCD mapaneri. Iyo inoyera 43-inches (108cm), sekufungidzirwa kwezita uye izvi zvinoshandura kune pixel density yeinenge chete 51ppi. Semunhu hunhu hweVA mapaneru, kuratidzwa kwacho kune musiyano wakanaka neakawanda matema akasviba uchienzaniswa nepaneru IPS. Realme anoti inokoshesa kupenya kwemazana mazana mana emakumi mana emadziro, ayo anopenya kwazvo kumakamuri mazhinji akanyatsovhenekerwa. Kuwedzera kune izvi, kuratidzwa hakuratidzike zvakanyanya uye chero magetsi asinganetsi paTV haafanire kukukanganisa kuona kwako.
Kubva pamamita (3.3ft) kana kupfuura, iyo inoratidzira inoratidzika yakanyatsonaka uye yakatsanangurwa, kunyanya kana iwe uri pamberi payo. Sezvineiwo, iyo Realme TV ine akakurumbira ekuona engles 178º, iyo inokatyamadza - uye isingawanzo - yeyenzvimbo yeVA. Izvi zvinoreva kuti Realme anogona kunge achishandisa "wide-angle VA panapa", tekinoroji inogona kutariswa pakati pakati peiyo VA yakachena uye IPS pani.
Iko kunoonekwa kwekuchinja kweruvara uye kuderedzwa muhureki uchiona TV mumakona akanyanya asi hazvitadzise maonero ekuona. Uyezve, hapana kuderedzwa kwakanyanya mukupenya sezvatinoona pane zvakajairika VA mapaneru.
Miseve iri pakuratidzika inoita seyakafanana pakupenya kukuru. Asi pakujeka kwakaperera, iyo nonuniformity inowedzera kuoneka uye iwe unogona kuwona yakajeka mabara pamwe kuruboshwe uye kurudyi kurudyi kwekuratidzira nepo pakati iri pakati kudzikira. Kuve nemucheto-litse, chinoratidzira hachitsigire kudzikira kwenzvimbo sekusimbiswa neyedzo iripazasi.
Iyo Realme TV 43 ″ yakanaka kwazvo maererano neyakajairika kubereka. Iwo mavara ari punchy chaizvo uye anogadzira inonyatsonakidza ekuona chiitiko pamwe nekukwirira musiyano weVA pane. Kunze kwekutaura kuti kuratidzwa kunotsigira mamirioni zviuru gumi nematanhatu, hapana chirevo maererano nemagemhu akakurumbira seNTSC kana DCI-P16.7 - uye kuve wakanaka, munhu wese anoshandisa angangoita ₹ 3 (~ $ 22,000) paTV yakangwara haanganetsi ivo pachavo neruzivo.
Realme yakashandisa kudzidza kwayo kubva ku-smartphone kutora mafoto kuti iwedzere vibrancy yechiratidziro. Mhando dzese mbiri dzinouya ne Realme's Chroma Boost injini yekuzara kwemuvara wakabuda. Mhando dzose dziri mbiri dzinokwanisa kutamba maficha eHDR akadai seHDR10 uye HLG nekuvasarudza padanho re software - kunyangwe hazvo iyo mapanicha haina kuisirwa HDR. Kunyanya, HDR10 inowedzera inotsigira zviripo paNetflix - zvinosuruvarisa, kwete Amazon Prime Vhidhiyo sezvo inoda kanenge HDR10 + kutamba HDR zvirimo - asi inogona kuita kuti iyo iratidze yakasviba pane yakatarwa sezvo ichishandisa metadata yakamira yeHRR. Parizvino, hapana sarudzo yekuvhura HDR kana kuvhara pane yekuratidzira.
Kuratidzwa kweTremee TV kunopa mutsauko wakanaka wemuvara, satellite, inoshamisa yekutarisa kwakanaka.
Pazinga re software, Realme inokupa iwe sarudzo yekuwedzera zvakanyanya kunaka kwemhando uye iwo mavara ekuratidzira. Kunze kweiyo renji yekuratidzira presets, iwe unogona kuita zvakanaka-tune zvinhu zvakaita sengetera kana hue kana kugadzirisa iyo chena chiyero uye kupenya kune rumwe ruvara. Iko hakuna chiyero chiyero chekusimudza (senge MEMC) apa, izvo zvandinofunga kuti zvaigona kunge zviri zvekuwedzera kuwedzera sezvo iro jopo rinotsigira 60Hz. Asi pane zvakawanda zvingasarudzwa zvekuwedzera iwo mufananidzo wemufananidzo, kusanganisira:
DNR - iyo inoderedza kana kuti kururamisa kunze kwoonekwa ruzha
DI Firimu maficha - ayo anokwidza kumusoro mafirimu (kana 24fps zvirimo) kune HD chimiro-ne-chimiro
Adaptive Luma Kudzvinyirira - iyo inoshandura yega kupenya uye musiyano zvichibva pane zviri mukati
Chimiro chemutambo - kwenguva pfupi yekuratidzira mhinduro nguva
Pakazara, kuratidzwa kwakanaka zvine musoro maererano nemavara uye kupenya, kunyangwe pani yakapenya (kana sarudzo yekudzima HDR) yaizonatsiridza chiitiko. Kunyangwe iyo yakadzika pixel density, iwe hauzotarisa chero kukanganisa kana ruzha kunze kwekunge uchitarisa chiratidziro kubva padhuze nepedyo. Iyo yakazara-angle VA panel inobvumira kugara kwakaringana uye musiyano wepanzvimbo yeVA apo zvakare ichivimbisa yakanaka yekutarisa makona senge IPS pani - inokupa iwe zvakanaka zvese nyika. Iyo inoratidzira inosimbisa zvakakwana mutengo weReal TV.
Realme akaunganidza ese maviri TV TV maipi maviri-e-stereo matauri ari pasi peTV uye akavanzika nepurasitiki grille. Imwe neimwe yemasangano aya ekutaura inemutauri wakazara netauro inosungirirwa netaeter yekuwedzera yakakura uye yepamusoro yepakati-renji marefu. Izvi zvinowanzobatsira kuvandudza kujekesa kwekutaura mune zvirevo uye hurukuro. Idzi dzese chiteshi dzakatarwa pa 12W imwe neimwe, zvichikonzera kuburitswa kwe 24W, iyo inopa Realme muganho pamusoro pevanokwikwidza vanoshandisa vasingatauri vane simba pavatauri veTV mumutengo uyu wemutengo.
Nepo mutauriri wakazara uye iyo tweeter yakasanganiswa ichiita kuti ive yakarebesa uye yakajeka ruzivo rwekutaura, vatauri vanosimbisa vanoita zvisina kunaka kana zvasvika pane bass. Panzvimbo yezvinhu zvembassy zveimwe odhiyo - rwiyo rwakaita seinorema kana kubhururuka - unongonzwa ruzha rwakatambanudzwa pasina chero chirevo. Pane yakajairwa frequency mhinduro bvunzo, ivo Realme TV's inbuilt speaker inonzwika pakati pe 150Hz-16,000Hz.
Vatauri veReal TV vane ruzha uye vakajeka asi vanoshomeka zvinetswa.
Nepo zvigadzirwa zvacho zvisiri kunzwa zvakanaka, Realme yakayedza kuti iite zvikanganiso kuburikidza nesoftware. Kunze kweakasiyana eema audio presets, iwe unowana 5-bhendi yakaenzana uye yakatenderedza ruzha mhedzisiro. Iyo Realme TV inotsigirawo zvinowedzeredzwa pasi peDolby Dhijitari uye iwe unogona kusarudza kubva kune rakasiyana-siyana reDolby Audio presets kuti uwedzere ruzivo rwekuteerera kune yako yaunoda. Kuwedzerwa kweDolby Dhijitari kunobatsira zvakanyanya kana iwe uine yekududzira kunze yekumusoro yakasungirirwa paTV.
Iyo yekurira yakajeka haisi imwe yeiyo Realme TV's yakasimba mapoinzi asi Realme anga atovimbisa kuti vachazarura 100W ruzha rwebhuruu ine subwoofer munguva pfupi. Izvi zvinogona kuitika kutanga kwemwedzi waChikunguru 2020 apo Realme zvakare ichavhura 55 43 “mukurumbira” Android TV. Iyo XNUMX ″ Realme TV inoratidzawo neye SPDIF pachiteshi uye iyo inoratidza saizi yekurira yaizotsigirawo zvakafanana.
Iyo Realme TV inopihwa ne stock Android TV Pie isina chero system yekuwanikwa senge Xiaomi's PatchWall kana OnePlus 'O oxygenPlay. Izvi, sezve Realme, ndeyekupa vashandisi simba rekushandisa pamusoro pezvavanoda kutarisa. Mapurogiramu mashoma akadai seNetflix, Amazon Prime, uye webhusaiti inonzi "Pango Browser" inouya isati yaiswa pane iyo Realme TV. Realme akawedzerawo tile ye "AI Point" iyo ingori nzira pfupi yedhirowa dhiraivhu raunogona kuwana raunorodha uye padivi mapulogalamu. Iko hakuna bhatani rakananga rekupinda pane ari kure controller kuti asvike iyo Android TV's app dhizaini asi iwe unogona kuita izvozvo nekutsikirira kwenguva refu bhatani repamba - kunyangwe iwe usingaone zvinotsaurwa pamabasa pano. Kunze kwezvimwe zvingasarudzwa uye magadzirirwo ataurwa pasi peDisplay uye Audio zvikamu, hapana zvakawanda zvakajairwa kuTV.
Panyaya ye Hardware, iyo Realme TV inomhanyisa pane quad-core MediaTek chipset ine ina AMM Cortex A53 cores paPRU uye Mali-470 MP3 GPU. Pamwe chete neMediaTek chikuva, iyo Android TV inouya inongori 1GB ye RAM uye 8GB yekuchengetedza yemukati. Nepo chiitiko chemushandisi chakanyanya kutwasuka, iyo Realme TV ine dzimwe nguva yekuita stutters, kunyanya ichiri kutanga, uye kana mapurogiramu mazhinji akavhurika kamwechete. Izvi zvinonzwa sekuderedzwa kweiyo imwe gigabyte ye RAM kunyangwe iyo RAM inoshandiswa pano ine yakakwirira 2133MHz frequency.
Kuita kunoiswa mubhodhoro neimwe chete GB ye RAM.
Ndakaona kuti kudzora huwandu hwevashandisi vekumashure madhivhisi matatu kana mana kubva kuAdigital Sarudzo muAdv TV's Zvigadziriso zvinogona kuderedza maitiro aya, asi chero mushandisi angadai akave nerunyararo ne 1.5GB kana 2GB ye RAM. Realme inoratidzika kunge yakacheka mamwe makona kuchengetedza mutengo weTV uchitariswa.
The Realme TV 43 ″ inouya neWidevine L1 kuferefetwa uye izvo zvinobvumidza Full HD kutamba patsva paOTT apps zvinosanganisira Netflix, Amazon Prime Vhidhiyo, Hotstar nezvimwe.
Zvakakosha kutaura kuti Realme yakadzora kurodha pamabhurawuza uye uchafanira kushandisa USB drive kutamba mimhanzi kana sideload apps. Unogona kuisa Aptoide TV pamwe neATV yekutanga kubva kuGoogle Play Store kugadzirisa iyo yekupedzisira.
Chekupedzisira, iyo Realme TV inouya nayo Google Assistant Tsigiro asi pane kunonoka kwemasekonzi maviri 2-5 nguva yese yaunoyedza kukumbira kana kutaurirana neMubatsiri. Iyo Realme TV zvakare inonetsekana kubatanidza uye kudzorwa neGoogle's Android TV Remote Control application - kunyanya uchishandisa ikhibhodi yekuisa basa muapp.
Android TV Remote Control (Mahara, Google Play) →
Iyo iri kure yakasungwa pamwe neiyo Realme TV yakareruka uye yakanyanya ergonomic. Realme akasarudzira dhizaini yemhepo pachinzvimbo chisingafananidzwi kuitira kuti kure kure kune huremu uye haunzwi kunorema pane chero mugumo. Ukobvu uye hukoshwa hwakatenderedza pasi zvinogadzirisawo kubatwa.
Nezve mamiriro eiyo, iyo Realme TV's remote controller yakafanana ne yechipiri shanduro yeOnePlus TV iri kure, iyo yakagadziridzwa kuwedzera bhatani reNetflix. Iyo D-pad iri kure yakafungidzirwazve neyakajairwa ruvara rwegoridhe kubva mukutsikisa kwaRearl. Iyo kure inouya nekiyi yekukurumidza kukiya yeNetflix, Amazon Prime, YouTube. uye Google Mubatsiri. Kusiyana neiyo yakajairika yakatarwa yekumhanyisa, mabhatani ezvigadzirwa pa Realme TV anoiswa musiyano uye izvo zvinogona kutora nguva kuzviita kuti ndangariro dzemhasuru. Iyo kure inouyawo neine-mutsetse maikorofoni
Realme TV iri kure neakareba, ergonomic, uye inonakidza kubata.
Yese mabhatani aya anogadzirwa kubva mudura-senge zvinhu uye kunzwa zvakanaka pamusoro pekubata. Iyo matte-yakafanana neyekushongedzwa kweiyo Realme TV iri kure zvakare inowedzera kune kunakidza kunofadza.
Iyo kure inotsigira zvese zviri zviviri - infrared uye Bluetooth - yekutaurirana neTV. Kukurukurirana neTV pamusoro pe IR kunonoka uye kuenzaniswa neBluetooth uye ini ndinokurudzira kukurudzira kuverengera. Kana iwe ukabatanidza iyo kure kuburikidza neBluetooth, unogona zvakare kuona iyo chikamu chemutero chakasiiwa mumabhatiri eAAA mune Mameseji ezvirongedzo, ndiko kuwedzerwa kwakanaka.
Kubatana uye ini / O
Nekubatana, iyo Realme TV inoita kunge yakazara nezvisarudzo. Pane izvi, iwe unowana:
3x HDMI inomira kunze
Chekutanga chete chinotsigira HDMI ArC
CEC inotsigirwa paHDMI 1 uye HDMI 3 chete
maviri USB 2.0 madoko
chinzvimbo chePSDIF chedhijitari odhiyo kunze
imwe chiteshi cheAntena
chiteshi cheLAN chimwe
Iwo mapango anoiswa pane yekumashure uye akapatsanurwa kuita mapoka maviri panzvimbo imwechete irongwa. Imwe HDMI doko, iyo headphone jack, Dhijitari doko redhiyo, uye maviri USB ports anonongedza kuruboshwe kweTV uku chiteshi cheLAN nemachiteshi maviri eHDMI vakatarisana pazasi. Iwo madoko anoiswa padivi pechikamu cheTV uye anogona kunge asiri kuwanikwa zvakanyanya kana TV ichizorora petafura nemusana wayo uri padyo nemadziro kana kana yakaiswa kumadziro. Iyo tambo yemagetsi haina kuparara, zvinoreva kuti haugone kuchinjana neimwe kwenguva refu.
Kune isina waya yekubatanidza, iyo Realme TV inouya ne single-band Wi-Fi uye Bluetooth 5.0. Kushaikwa kweiyo mbiri-bhendi Wi-Fi hakufadze sezvo iyo 2.4GHz ine akakosha kumhanya kudonhedza zvinhu mukati uye kutambudzika nekuda kwekuvhiringidzwa kunokonzerwa 2.4GHz zvikwangwani zvakaburitswa neBluetooth zvishandiso kana zvishandiso senge mikomboni. Izvi zvinogona kutungamira mukuderedzwa kukuru kumhando yechiratidzo.
Mazhinji I / O sarudzo asi ese anoramba akaoma kuwana.
Kana iri Bluetooth, iyo TV inoramba painenge ichibatanidza kumidziyo inopfuura mamitha kubva pairi. Nekudaro, kana chongobatana, huwandu hwacho hwakanakira kuti upfeke nharembozha uye unofamba-famba wakasununguka munzvimbo inotenderera yemamita gumi (isina chero chinhu chepanyama pakati).
Iyo TV inotsigira isina waya kukanda kuburikidza neChromecast, Miracast pamwe neasina waya kuratidza rutsigiro Windows. Unogona zvakare kurodha pasi Anwendung inonzi AirScreen uye woishandisa pamwe neiyo iOS kana MacOS chishandiso kuburikidza neApple's AirPlay protocol.
AirScreen - AirPlay & Kanda & Miracast (Yemahara +, Google Play) →
Realme Android TV: Kuratidzwa kukuru kunoenderana nekumisikidza mukati
Iyo Realme TV inopihwa yakanaka uye yakazara Satellite-backlit inoratidzwa iyo yakapetwa kune yakasarudzika gadziriro yekuteedzera. Asi iyo mediocre hardware, kunyanya iyo 1GB RAM, inogona kudzivisa chiitiko chakatsiga. Realme yakacheka zvakajeka makona mune zvemukati hardware kuti ive nemakwikwi emakwikwi. Kunyange software yacho yakazara nezvinhu zvinobatsira, panogona kunge paine nyaya dzekutarisa idzo isu tinotarisira kuona dzichigadziriswa neramangwana reOTA. Imwe nyaya yakadaro ndeye kubwinyisa apo uchishandisa Google's Android TV kure control app.
Kana iwe uchida chiitiko chikuru chekuratidzira uye uchange uchishandisa TV yekutarisa OTT zvemukati kana kubva kunze set-yepamusoro bhokisi, iyo Realme TV iri sarudzo yakanaka. Ini, zvakadaro, ndinovimba Realme inotanga 43 4 inch muenzaniso ine XNUMXK resolution - sekutanga kwayo mukwikwidzi Xiaomi akazodaro gore rapfuura. Kunyange kuwanikwa kweiyo 4K modhi kusati kwasimbiswa, Realme akavimbisa kuti vachazarura yakakura 55 ″ "mureza" smart Android TV munguva pfupi.
Iyo Realme TVs iripo muIndia pamutengo wekutanga we ₹ 12,999 (~ $ 170) yeiyo 32-inch HD modhi apo 43-inch Full HD modhi inouya ye ₹ 21,999 (~ $ 290). Aya maTV anowanikwa kuburikidza nechitoro chaicho chaReatme neFlipkart kuburikidza nekutengesa kwechiedza kunoitika Chipiri rega rega.
The post Realme Android TV 43 ″ Ongororo: Kukwikwidza Kwakaoma kweMi TV yakatanga kutanga xda-vatadzi.
Izvi ndizvo izvo Realme inoda kugadzirisa pane inotevera Realme Bhendi
← Google Sangana neGets Noise Cancellation Feature; Heano Mashandiro Ainoita Dell XPS 13 ongororo: Bite-saizi bezel bonanza →